Marna ma aha goor hore in haweeneydu kantaroolto caafimaadkeeda. Haddii aad ka weyn tahay 21 jir, bixiyeyaasha Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ayaa samayn kara ka -hortag imtixaan dumar fiican waxna ka qabtaan wixii tabasho ah ee soo kordha.
Inta lagu jiro baaritaanka haweeneyda ii dhow, rugtayada caafimaadku waxay bixisaa baaritaanka naasaha, baaritaanka miskaha oo leh baaritaanka Pap smear, la-talinta ka-hortagga uurka, iyo la-talinta menopause. Dumarka badankoodu waxay qaataan hal sanadkiiba, laakiin waxay ku xidhan tahay calaamadahaaga iyo sababaha halista, waxaad u baahan kartaa inaad marar badan soo gasho.
Ma jeclaan lahayd inaad la kulanto OB/GYN? Ma rabtaa inaad ogaato sida loogu diyaar garoobo imtixaanka naagta wanaagsan? Jadwalka a la tasho oo leh mid ka mid ah xubnaha kooxdayada naxariista leh ee Columbus, Dublin, ama Westerville, OH. Waxaa naga go'an inaan siino daryeel dhammaystiran haweenka dhammaan baahiyaha iyo asalka.
Goorma ayaan u baahanahay baaris haweeneyda wanaagsan?
Dumarka badankoodu waxay maraan imtixaankii ugu horreeyey ee haweenay ah markay 21 jirsadaan, ka dibna sannad walba ku soo noqdaan baaritaannada. Si kastaba ha ahaatee, bukaanku waa inay ogaadaan in baaritaanka haweeneyda wanaagsan ay inta badan ku saabsan tahay ka hortagga. Haddii aad qabto walaacyo gaar ah ama aad u culus oo ku saabsan caafimaadkaaga ama nidaamka taranka, waxaad wici kartaa xafiiskayaga iyadoon loo eegin goorta baaritaankaaga xiga la ballamay. Shaqaalaheena waxaa si buuxda loogu tababaray dhalmada iyo dumarka. Waqti badan oo ay tahay inaan helno calaamadaha digniinta, waxaa sii wanaagsanaanaya fursadahayaga ka hortagga iyo daaweynta arrimaha halista ah.
Sida loogu diyaar garoobo imtixaanka haweeneyda ladnaanta leh
Kahor intaadan bilaabin baaritaankaaga haweeneyda wanaagsan ee Xirfadlayaasha Caafimaadka Dumarka, filo inaad buuxiso xoogaa waraaqo ah oo aad iska hubiso kooxdayada maamulka. Kadib waxaan ku geyn doonaa qolka imtixaanka, halkaas oo aan ku weydiin doono wax kasta oo xaalado ah oo la xiriira caafimaadkaaga galmada iyo taranka, daawooyinka hadda jira, iyo taariikhda qoyska. Markaan dib u eegno asalkaaga caafimaad, adeeg bixiyayaashayadu waxay ku siinayaan fursad aad kaga hadashid mowduucyo gaar ah, sida ikhtiyaarrada ka -hortagga uurka ama khaladaad ku dhaca wareegga caadadaada. Naso hubso in xog kasta oo aad wadaagto si gaar ah loo ilaaliyo.
Maxaa dhacaya inta lagu jiro baaritaanka haweeneyda ladnaanta leh?
Imtixaanka haweeneyda wanaagsan ee Columbus, Dublin, ama Westerville, OH waxaa ku jira baaritaanka naaska iyo miskaha. Waxaan ku qiimeyneynaa naasahaaga burooyin, barar, ama aan caadi ahayn oo laga yaabo inay tilmaamaan jiritaanka kansarka. Inta lagu jiro baaritaanka miskaha iyo baaritaanka Pap smear, waxaan baarnaa afka ilmo -galeenka iyo makaanka. Arrimaha aan hubinno waxaa ka mid ah kansarka ugxansidaha ama makaanka, caabuqyo, fiix, ama wax kasta oo u muuqda wax aan caadi ahayn.
Miyaan u baahanahay ballan dabagal ah?
Ka dib marka baaritaankaaga dumarka wanaagsan la sameeyo, Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ayaa dib u eegi doona natiijooyinkayaga. Haddii wax walba u muuqdaan kuwo caadi ah oo caafimaad qaba, waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn ballan dabagal ah haddii uusan si kale u sheegin OB/GYN. Haddii wax dhibaato ah la helay intii lagu jiray imtixaankaaga, waxaan ballansan karnaa baaritaanno dheeraad ah ama booqasho daba-gal ah. Kooxdayada caafimaadku waxay halkan u joogaan inay kaa caawiyaan bixinta daryeelka iyo taageerada aad u baahan tahay.
Igu qaado agagaarka imtixaan dumar wanaagsan leh
Habka ugu fiican ee aad ugu dul joogi karto caafimaadkaaga iyo ladnaantaada ayaa ah adiga oo mar uun i ag maraya baaritaan naag-caafimaad leh ugu yaraan hal mar sannadkii. Tani waxay siinaysaa OB/GYNs iyo bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka ee Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka fursad ay ku eegaan dhammaan dhinacyada nidaamka tarankaaga, la socoshada isbeddel kasta oo ku dhaca jirkaaga, oo kaa caawiya aqoonsiga khataraha iman kara. Haddii aad qabtid su'aalo ama aad rabto inaad ogaato sida loogu diyaar garoobo imtixaanka dumarka wanaagsan ee Columbus, Dublin, ama Westerville, OH, la hadal mid ka mid ah shaqaalahayaga aqoonta leh maanta!